I-SalesRep.ai: Kusetshenziswa ubuhlakani ukwenza ukusebenzisana kwe-Multi-Channel Prospect | Martech Zone
I-SalesRep.ai: Kusetshenziswa ubuhlakani ukwenza ukusebenzisana kwe-Multi-Channel Prospect
NgoLwesihlanu, Mashi 9, 2018 NgoLwesithathu, Okthoba 28, 2020 Douglas Karr
Njengoba le vidiyo isuka ku- Omele ezokudayisa imibukiso, ingxenye enkulu yesikhathi sokuthengisa okuphumayo isetshenziselwe ukuxhuma noma ukuhlela ukuxhumana nekhasimende. I-SalesRep isebenzisa i-call automation ngesikhulumi esizimele, sokucubungula ulimi lwemvelo ukususa lowo mzamo ngemuva kwethimba lakho lokuthengisa, ukubenza bakwazi ukugxila kukho konke okuthengiswayo - hhayi ukuxhumana.
Ipulatifomu ivumela amaklayenti ukuthi akhe izinqubo ezihleliwe ezisebenzisa i-imeyili, izwi, kanye nemiyalezo ye-SMS.
Ukucindezela okulula kwenkinobho ku-CRM yakho kuqala inqubo yokulandelela ngakho konke ukuhola umuntu wakho wokuthengisa okudingeka axhumane naye. I-SalesRep ilandela imikhondo yezinyanga ngaphandle kokukhathala. Lapho isivumelwano singenziwanga ngesikhathi sokuxhumana, engeza ukuhola kulayini wenqubo yokulandelela bese ipulatifomu izokwenza konke okunye.
Izici ezibalulekile ze-SalesRep Faka:
Ukulandelela okulandelanayo - Ukugeleza kwesenzo kwamakholi, imibhalo kanye nohlelo lwe-imeyili kuzosebenza ukulandela ukuhola ngakunye. I-SalesRep.ai isebenza ngokubambisana nenhlangano yakho ukusetha ukulandelana ngokuya ngokuthi umjikelezo wakho wokuthengisa uku kuphi. Uma ungakaze ukhulume nomholi, kuthathwa izinyathelo ezilandelanayo ezifanele. Uma ulandela kusuka ocingweni olwedlule lokuthengisa kuqala okuhlukile. Faka noma iyiphi inqubo yokulandelela edingekayo ku-SalesRep.ai.
Amakholi wefoni nge wendawo ubukhona - I-SalesRep.ai izokubizela imikhondo egameni lakho kaningi futhi inqobo nje uma ufuna. AbakwaSalesRep.ai bazoshayela kusuka kuzinombolo zasendaweni futhi ngeke bakhathaze abaphenduli bakho baze bahole kulayini. Uma sebekwenzile lokho - AbakwaSalesRep.ai bazobatshela ukuthi lolu cingo luphathelene nani bese bexhuma emnyangweni wakho wokumela noma wokudla. Uma ukuhola kungatholakali, i-SalesRep.ai izoshiya ivoyisimeyili noma izocisha ukushaya ucingo ngokuzayo.
I-AI SMS kanye nemiyalezo yama-imeyili - I-SMS ithunyelwa ivela ezinombolweni zendawo nama-imeyili athunyelwa evela kuma-reps akho ama-akhawunti akho njengalapho ewathumela. Ngento ye-AI, lapho i-SaleRep.ai ithola umlayezo ovela ekuholeni, ingaqonda incazelo futhi isebenze kuyo. I-AI ingamisa ngesizotha noma ilibazise ukulandelana; Hlela noma Hlela kabusha ucingo; bese uphendula imibuzo elula ukuze ungadingi.
Nasi isithombe-skrini sokuthi izinjini zabo zokulandelana zithuthuke kanjani.
Uhlelo lubanzi, lunamandla okungena kuwo wonke amakhasimende, kukho konke ukuthengiselana, nayo yonke impendulo.
Banikeze nokunwetshwa kwe-Chrome:
Ukuhlanganiswa kufaka phakathi i-Salesforce, Velocify, Microsoft Dynamics, I-Hubspot, kanye ne-Infusionsoft. Zisebenzisa i-SalesRep.ai, izinkampani zingagwema ukulahlekelwa ngamakhasimende, zingakhulula isikhathi sokuthengisa ngokuthengisa, futhi ekugcineni zivale amakhasimende amaningi.
Tags: aiukusethwa kwe-aphoyintimentiubuhlakani be-crmindawoInfusionsoftMicrosoft Dynamicsukuhlelwa kokuqokwa kokuthengisaukuthengisa okuzenzakalelayoizingcingo zokuthengisaUkulandelana kokuthengisasalesforceomele ezokudayisaukuthengisa.aivelocity
I-ResponseTap: I-Smart Match Intelligent Call Tracking Attribution
Ungaboleka nini futhi usebenzise isithombe ku-inthanethi?